Manome fialokalofana vonjimaika ho an'ny vehivavy Afghana 106 taona i Suède
Oktobra 4, 2017 1 Namaky 1 aho
Vehivavy Afghan iray 106 taona izay nanao dia nankany Eropa tamin'ny 2015 izay nahatafiditra ny zanany lahy sy ny zafikeliny nitondra azy namakivaky tendrombohitra sy ala no nomena fialofana vonjimaika any Suède.
Nanambara ny tribonaly misahana ny fifindra-monina ny alarobia teo fa nanova ny fanapahan-kevitry ny maso misahana ny fifindra-monina soedoà ny sesitany an-dry Bibihal Uzbeki, izay kilemaina mafy ary zara raha miteny.
Nilaza ny fitsarana fa ao anatin'ny "toe-pahasalamana tena ratsy" izy, ary nampiany fa ny fandroahana "dia azo heverina ho fitsaboana tsy mendrika sy manambany olona."
Nomena “fahazoan-dàlana voafetra mandritra ny 13 volana” izy izay mifarana amin'ny 19 Jolay 2019, hoy ny zafikeliny Mohammed Uzbeki. Ny dian'i Uzbeki namakivaky an'i Eropa dia nanjary lohateny lehibe tamin'ny 2015.
Previous Radixx International dia manendry an'i John Elieson ho filoha sy tale jeneraly
Manaraka Ny Unions sy ny United Airlines dia manidina maherin'ny 300 ireo mpandray anjara voalohany sy mpilatsaka an-tsitrapo ho any Puerto Rico